Indha-sarcaadku Waa qeyb Sixirka Kamid ah. -
HomeArimaha bulshadaIndha-sarcaadku Waa qeyb Sixirka Kamid ah.
Indha-sarcaadku Waa qeyb Sixirka Kamid ah.
November 2, 2019 F.G Arimaha bulshada, Wararka 0
Waa wax aad u wanaagsan in miisaayadda dalku ay kororto sanadba sanadka ka dambeeya, waxaa iyadana wax lagu farxo ah in ciidamadda mushaarkii loo kordhiyo, waaba haddii ay siin doonaan sanadka u hadhay.
Balse waxaa la odhan karaa waxaasi oo dhan waa indha-sarcaad ummadda lagu marin-habaabinayo, waana miisaaniyad warqado la iskaga soo qoray oo run & been midka ay tahay aan markhaati loo haynin. Waxaana taas daliil u ah, sida ka muuqata bogga wasaaradda maaliyadda, sidoo kalena ay qirayaan xildhibaanadda laba gole, saddexdii sano ee lasoo dhaafay xukuumaddu weli Baarlamaanka uma aysan soo gudbinin xisaab-xidhkii miisaaniyadihii horay loogu ansixiyay, muddadii ay xilka hayeen.
Baarlamaan ayuusan dalkan lahayn ee sharci ma aha dunida & Soomaaliyana midna horay ugama dhicin in xisaabtii hore oo aan lasoo xidhin, xisaab kale laga daba geeyo, waayo sanadkii hore cadadka ay soo qorteen illaa hadda inta ay sheegteen inuu ka yaraaday & inuu ka batay midna caddayn looma hayo. Tusaale waxaa kuugu filan adigaba iska soo qaad, ganacsade aad xoolo kula shirkowday maka yeeli lahayd sanad walba lacag hor keen, isaga oo aan kuu sheegin khasaaraha & faa’iidada ee xisaabtii sanadka hore?
Waxaa sidoo kale xusid mudan miisaaniyadda la kordhiyay inaan lagu salaynin kobac dhaqaale, ama kaabayaasha & ilaha dhaqaaalaha oo la kordhiyay, balse waxaa lagu saleeyay canshuur la kordhiyay, taas oo ka dhigan in shacabka dhibkii hore ee sicir-bararka dhib kale loogu sii daray. Tan oo kale waaba tii xilligii dawladdii dhexe sababtay in wasiirkii maaliyadda (Ka-dare) loogu magac daro.
Hadal & dhammaan, ummadda Soomaaliyeed waxay ku qanacdaa in xukuumaaddu kororka miisaniyadeed ay kala doodo, khuburada maaliyada ee labada gole & aqoonyahanada Xamar ku sugan ee ku xeel-dheer cilmiga dhaqaalaha, koowna uu ka yahay Prof Yaxye Caamir. Haddii ay diidaan doodo daah furan, oo miisaaniyadda looga doodayo, waxaa la odhan karaa waxoodu waa indha-sarcaad, indha-sarcaadkuna waa qeyb sixirka kamid ah.